Ciidankii Badbaado Qaran oo ka baxay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidankii Badbaado Qaran oo ka baxay Muqdisho
Ciidanka Badbaado Qaran, ee ku suganaa Magaalada Muqdisho ayaa dib looga saaray Caasimadda, waxaana loo sameeyay xaflad sagootin ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamadii gadoodsanaa ee ka hor yimid muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo, ayaa maanta dib looga saaray Magaalada Muqdisho, iyadoo la fulinayo heshiiskii ay gaareen guddigii uu RW, Rooble, u magacaabay xallinta arrinta ciidamada.
Ciidamado aad u fara badan, oo wata boqolaal gaadiidka dagaalka ah, oo ahaa kuwii fariisinta ka dhigtay degmooyinka Kaaraan, Cabdicasiis iyo Yaaqshiid, ayaa laga saaray magaalada waxana dib loogu celshay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay hore ugu sugnaayeen.
Dhamaan ciidamada ayaa la isku geeyay banaanka Caasimadda si loo sogootiyo, waxaan Xeebta Mirinaayo ee degmada Kaaraan loogu qabtay Xaflad mahad celin ah.
Xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka, Saraakiil ciidan, Siyaasiyiin, iyo Odayaal dhaqan, ayaa ka qeyb galay, macasaameynta ciidanka la magac baxay Badbaadad Qaran ee taabacsan Mucaaradka.
Sarreeye Gaas, Cali Caraaye, oo lo yaqaan ‘Gacma-dulle’ oo ah shaqsiga ugu sareeya ciidanka maanta laga saaray magaalada ayaa sheegay in ay RW Rooble, ka wada hadleen xallinta ciidamada laga hakiyay xuquuqaadka, lana hagaajin doono muddo labo todobaad gudahood ah.
Wuxuu sheegay in ay soo laaban doonaan, haddii koox gooni ah, isku daydo in ay boobto doorashada dalka, lana doonayo in waddanka laga hirgaliyo doorashooyinka labada bilod ee soo socda.
Ciidamadaan ayaa intooda badan magaalada soo galay 25-ki bishii hore, waxayna diideen muddo kordhintii Golaha Sharci dajinta uu u sameeyay Hay’adaha Dowladda 12 April 2021.